I-china i-HDPE pipe extrusion line abakhiqizi nabaphakeli | FAYGO
Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni amapayipi wokuhambisa amanzi we-HDPE, amapayipi wokuhambisa igesi. Kungenza amapayipi e-HDPE ngobubanzi kusuka ku-16mm kuye ku-800mm. Ngeminyaka eminingi yokuthuthukiswa kwemishini yepulasitiki nesipiliyoni sokuklama, le layini ye-HDPE ipayipi ye-extrusion inesakhiwo esiyingqayizivele, idizayini iyinoveli, imishini yonke yokuhlelwa komugqa inengqondo, ukusebenza kokulawula kunokwethenjelwa. Ngemfuneko ehlukile, lo mugqa wepayipi we-HDPE ungakhiwa njengomugqa wokuphindaphinda wepayipi we-extrusion.
I-extruder yomugqa wepayipi le-HDPE yamukela ukusebenza kahle kwesikulufu nomgqomo, u-gearbox uqina u-gearbox wamazinyo ngohlelo lokuzigcoba. Imoto yamukela i-Siemens motor ejwayelekile nesivinini esilawulwa yi-ABB inverter. Uhlelo lokulawula lusebenzisa ukulawulwa kwe-Nokia PLC noma ukulawula inkinobho.
Lo mugqa wepayipi we-PE ubunjwe: Ishaja yezinto ezibonakalayo + SJ90 Isikulufa esisodwa se-screw extruder + ipayipi isikhunta + i-vacuum calibration tank + ukufafaza ithangi lokupholisa x 2sets + umshini wesibungu wokukhipha isibungu + umshini wokusika othuli.
Umzimba wamathangi we-vacuum calibration tank wamukela ukwakheka kwamakamelo amabili: ukulinganisa kwe-vacuum nezingxenye zokupholisa. Womabili amathangi wokuhlanza kanye nesifutho sokupholisa ithangi amukela insimbi engagqwali 304 # Uhlelo lwe-vacuum oluhle kakhulu luqinisekisa ukulinganiswa okuqondile kwamapayipi; ukufafaza ukupholisa kuzothuthukisa ukusebenza kahle kokupholisa; Isistimu yokulawula ukushisa kwamanzi ngokuzenzakalela yenza umshini uhlakaniphe kakhulu.
Umshini wokukhipha lo mugqa wepayipi uzosebenzisa uhlobo lwezibungu. Ngekhodi lemitha, lingabala ubude bepayipi ngesikhathi sokukhiqizwa. Uhlelo lokusika lwamukela umsiki ongenalo uthuli ngohlelo lokulawula lwe-PLC.
imodeli FGE63 FGE110 FGE-250 FGE315 FGE630 FGE800
ipayipi ububanzi 20-63mm 20-110mm 75-250mm 110-315mm 315-630mm 500-800mm
imodeli extruder SJ65 SJ75 SJ90 SJ90 SJ120 I-SJ120 + SJ90
amandla emoto 37kw 55kw 90kw 160kw 280kw 280KW + 160KW
amandla we-extrusion 100kg / h 150kg 220kg 400kg 700kg 1000kg
Langaphambilini Umshini wepayipi le-PPR
Olandelayo: 12-575mm6.5mm obukhulu PE umugqa ukukhiqizwa ipayipi
Layisha ngokugcwele futhi ulayishe umthwalo wokufaka ogcwele ngokuzenzakalela. Icompressor izoqala ngokuzenzekelayo uma ingekho ingcindezi, bese iyeka ukusebenza lapho ingcindezi igcwele ethangini lomoya. Lapho i-compressor ishoda ngogesi, ugesi uzobuyela emuva. Lapho ingcindezi iphezulu kakhulu, izinga lokushisa nalo liphezulu, elingazivikela ngokugcwele. Ungasebenzisa i-compressor yethu ngaphandle kwabasebenzi abasemsebenzini.
Umugqa we-WPC we-extrusion line
Lo mugqa usetshenziselwa kabanzi ukukhiqiza amaphrofayli ahlukahlukene we-WPC, njengephrofayili ye-WPC yokuhlobisa, iphaneli le-WPC, ibhodi le-WPC.
Inqubo yokugeleza kwalo mugqa kuyinto I-PP / PE / PVC + ukhuni oluyimpuphu + isengezo - ukuxubana — okuphakelayo kwezinto ezibonakalayo — i-twin screw extruder— isikhunta ne-calibrator — ithebula elenza i-vacuum — umshini wokudonsa — umshini wokusika — i-rack rack.
Le nsimbi ye-WPC extrusion line yamukela i-conic twin screw extruder, enesistimu ye-degassing yokuqinisekisa ukwenziwa kwepulasitiki okuhle kakhulu. Isikhunta kanye ne-calibrator yamukela okokugqoka okugqokekayo; umshini wokudonsa nomshini wokusika ungakhiwa njengeyunithi ephelele noma umshini ohlukile.
Lo mugqa usetshenziselwa ngokukhethekile ukukhiqiza amapayipi e-UPVC anobubanzi obukhulu nobukhulu odongeni lwamapayipi ezicini ezifana namapayipi ezolimo nawokwakha, ikhebula layietc. Ububanzi obukhulu bepayipi bungaba yi-1200mm.
Umshini wepayipi le-PPR
Isetshenziselwa ngokuyinhloko ukukhiqiza ama-PP-R, amapayipi e-PE anobubanzi kusuka ku-16mm ~ 160mm, amapayipi we-PE-RT anobubanzi obusuka ku-16 ~ 32mm. Ifakwe imishini efanelekile esezansi, ingaphinde ikhiqize amapayipi we-mufti-ungqimba we-PP-R, amapayipi e-fiber-ingilazi ye-PP-R, amapayipi e-PE-RT ne-EVOH. Ngeminyaka yokuhlangenwe nakho kweplastiki yepayipi extrusion, sithuthukise nomugqa we-extrusion we-PP-R / PE wepayipi, futhi isivinini esikhulu sokukhiqiza singaba yi-35m / min (isisekelo kumapayipi angama-20mm).